Oppo nguva pfupi yadarika akatanga chirongwa chayo chekutanga cheR17 Pro muIndia, ichiunza makwikwi kune iyo premium smartphone chikamu, icho chave kutongwa neanofarira eOnePlus, Apple uye Samsung mafoni. Oppo R17 Pro yakavhurwa paRs 45,990 uye inowanikwa zvakanyanya pasirese. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti Oppo smartphone yakakodzera kutenga pamutengo wakadai, saka ngationei.
Oppo R17 Pro ine chokwadi chekurova kukwirira kusingazununguki kune mafeni. Zvese zvinhu kubva mukugadzirwa kwayo kuita uye bhatiri, iyo R17 Pro inopa nzvimbo shoma kwazvo dzekunyunyuta nezvayo. Ruoko runogona kunge rusina mhosho, asi rwunoita chokwadi nezvekutadza kuburikidza neyekucheka-matekinoroji matekiniki akarongedzwa mukati mefoni.
Ndanga ndichiedza Oppo R17 Pro kubvira payakatangwa muIndia, izvo zvakandipa zano rakazara rekuti iyo smartphone inoedza sei kupembedza mutengo weti. Pakupera kwezuva, mumusika wakaita seIndia, vanhu vari kuda kushandisa dhora repamusoro chete kana chigadzirwa chichiendesa kukosha kwayo - chimwe chinhu kunyangwe vatungamiriri veOppo vakabvumirana.
Oppo R17 Pro ndeye mureza-giredhi smartphone inokwikwidza muRs 30,000-plus chikamu - iyo yakatongwa neOnePlus kuIndia. Saka ini ndaifanirwa kuona kubva panzvimbo yekutarisa uko R17 Pro imire kana yakadzika pamakwikwi ayo ari pedyo uye kana zvine musoro kusimudzira kunyangwe yakakwikwidza kukwikwidza kubva kune vakwikwidzi.
Ndakagara ndichiyemura dhizaini yaOppo mafoni. Ivo vari pachinongedzo neazvino maitiro uye vanoita misoro kutendeuka. Oppo R17 Pro haina kusiyana. Iyo kambani haina kukwanisa kuzvirumbidza zvakanyanya nezve yakasarudzika gradient kupedzisa pane iyo R17 Pro's matte girazi kumashure. Oppo inodaidza iyi 3D fog gradient.
Pandaive ndichishandisa iyo R17 Pro, iyo yakajairirwa kumashure dhizaini yakakwezva maziso mashoma. Iyo gradient piritsi inoshanduka zvichienderana nemakona kuti mwenje unowira sei pamusoro payo. Icho chinonyanya kufadza chikamu ndechekuti pane imwe nguva ini ndakatowana iyo isina-gradient kutarisa, asi yaive ichinyanya kuchinja pakati pepepuru neblue.
Oppo zvakare akafananidza mativi efoni kune maitiro emuvara kumashure. Rutivi rwerudyi rune ruvara rwepepuru asi iyo yekuruboshwe ipende yebhuruu. Pazasi uye pamusoro pemipheto, iwe unogona kuona ese mavara ari kusangana nenzira yakajeka.
Iko kuiswa kwehuwandu hwevhudzi, bhatani remagetsi rakanaka. Kune mutauri we stereo pazasi kurudyi padyo neType-C chiteshi uye mbiri SIM kadhi slot yakagara padivi chaipo. Iyo yekuratidzira ine yekudonha mvura notch uye yakanyanyisa nzvimbo yakatetepa pamusoro peiyo notch yakatsaurirwa kune iyo nzeve. Iwo matatu makamera mune yakatwasuka kurongedza anotora yepamusoro nzvimbo chinzvimbo kumashure, iyo inonyatso kuenderana neakagadzika gradient ruvara.
Nezvose izvi, ini ndinowana iyo R17 Pro zvishoma gobvu kuti ibate, izvo zvinonyanya nekuti mativi haana kurodzwa. Zvakare, repaneru rekuseri harina smudge-proof, saka iyo kavha inouya mukati mebhokisi zvechokwadi inouya iri nyore kuchengetedza iyo R17 Pro inopenya. Ose maviri mapoinzi aya haasi madhiri ekuputsa.
Oppo R17 Pro kuongororaIBTimes India / Sami Khan
Oppo R17 Pro OngororaTiThai India / Sami Khan
Oppo R17 Pro Ongororo
Oppo R17 Pro kuratidza yakanyanya kufanana neOnePlus 6T. Munguva yekuongorora kwangu, ini ndanga ndichishandisawo 6T McLaren Edition, iyo yakandivhiringidza zvakanyanya. Mafoni ese ari maviri anotaridzika zvakafanana kubva kumberi, pasi kune iyo chaiyo ye-inoratidzira zvigunwe zvigunwe, inovheneka kana iwe uchinge watora mudziyo. Asi iwe haufanire kubata nekuvhiringidzika kumwe mikana yekuve yako R17 Pro uye OnePlus 6T yakanyanya kuderera. Iwe zvirinani kuenda nemumwe wevaviri.
Zvino, kana iwe uchifunga kutevedzera kuratidzwa kwe6T chinhu chakashata, ini ndaizoramba. OnePlus 6T yaive neimwe yeakanakisa kuratidzwa mumusika weiyo yakazara HD + resolution. Oppo R17 Pro yatora bheji yakachengeteka pano uye ini ndakanyatsogadzikana nazvo. Iyo 6.4-inch Yakazara HD + AMOLED inoratidzira yakawanda skrini yezvivakwa kune avo vanoda kutamba uye kudhakwa-kutarisa pane nhare mbozha.
Oppo R17 Pro inoratidzira yakajeka uye haikonzere kushushikana painoshandiswa mune yakaderera mwenje - nekuda kweinoshamisa Night Shield, iyo inounza inodziya inoshanduka mumavara. Iyi nzira yaive yakakwana pakuverenga nguva yekurara kana kunyangwe pasocial media kubhurawuza mukamuri rerima. Ini ndaive ndisina nyaya nekuteerera kwescreen uye mamakona ekuona akangonaka pafoni iyi.
Pakarepo mushure mekutaura nezve maonero, bhatiri raOppo R17 Pro rinoda kuti ritaurwe. Changu chandinofarira muR17 Pro ibhatiri, uye kuve yakatarwa SuperVOOC flash yekuchaja tekinoroji. Zviri nani here kupfuura zvese maficha R17 Pro mapakeji, iwe uri damn chaizvo ndizvo.
Ndisati ndataura nezve SuperVOOC uye R17 Pro bhatiri pano, regai nditaure chokwadi chekuti ndakanyatso kufadzwa neOnePlus 'Fast Charge (yaimbova Dash Charge) uye SuperCharge yeHuawei. Oppo's SuperCharge idanho rinokwira kubva kune ese ari maviri ekukurumidza kuchaja matekinoroji. Ipo OnePlus Fast Charge iine 20W kuburitsa, Huawei's SuperCharge inopa 40W uye Oppo SuperVOOC inotungamira machati aine inoputika 50W.
Idzo dzinongova nhamba dzevanhu vashoma kunze uko. Asi zvazvinoreva ndezvekuti Oppo R17 Pro ine SuperVOOC yayo yekuchaja inogona kusimbisa foni yako nekukurumidza kupfuura chero chinhu kunze uko. Bvunzo dzangu dzakaramba dzichiratidza kuti iyo R17 Pro haigone kungobhadharisa makumi mana muzana muzana mumaminetsi gumi, asi inogona zvakare kuzadza foni kumusoro mune isingasviki awa (40 maminetsi kuti ave chaiwo) Zvino ndicho chinoshamisa feat.
Oppo R17 Pro SuperVOOCIBTimes India / Sami Khan
The SuperVOOC inopomera iyo R17 Pro's 3,700mAh bhatiri, ayo ari maviri maviri akaenzana zvikamu zvakapatsanurwa zvakaiswa pamusoro peumwe neumwe. Pamwe pamwe nekuchaja nekukurumidza, Oppo R17 Pro inonunura zvinoshamisa pahupenyu hwebhatiri kumberi.
Nekushandisa kwangu, uko kunogara kuchisanganisira mameseji paWhatsApp, huwandu hwakawanda hwekufona, kubhucha pasocial media (zvakanyanya), kutamba mitambo (PUBG Mobile kunyanya) uye kutepfenyurisa kwevhidhiyo, Oppo R17 Pro inotora zuva rese. Pane imwe nguva, ndakanga ndisina kubhadharisa foni kwemaawa makumi maviri nemaviri nekukanganisa kushandiswa uye yaive iine muto wakasara usati wavhara. Kubhadharisa kunoshamisa kwazvo kunoita kuti zvive nyore kwazvo uye haufanire kunetseka nezve bhatiri.
Oppo R17 Pro ndeye kunyanya kune avo vanogara vachirara nezve hupenyu hwebhatiri mufoni, chimwe chezvinhu zvakajairika zvaunonzwa.
Oppo R17 Pro's matatu kumashure makamera anozobata ipapo chero munhu, asi muchokwadi, chete iwo maviri makamera (12MP f / 1.5-f / 2.4 maviri aperture uye 20MP sensors) anoita inorema-kusimudza. Chikamu chinonakidza chemakamera ekumashure ndiko kuchinjika kwemaviri aperture, ayo anogona kuoneka kana kupfura mune yakaderera mwenje mamiriro.
Ndasanganisa maitiro kune iyo R17 Promakamera. Mune zvimwe zviitiko, mhedzisiro yacho yaingove yakanyanya, asi dzimwe nguva yaizongova yepakati. Uye zvakaoma kugutsa vatengi nechimwe chinhu chepakati muprimiyamu yakaderedzwa foni. Rega nditsanangure pamusoro pazvo.
Ini ndaida husiku maitiro paR17 Pro, yakandibatsira kutora izvo zvingave zvisingaite mumarata akaderera. Mukujeka kwemasikati, ndakanga ndisina chokwadi chekuti kamera dzaizopindana uye R17 Pro yakatunurwa chaizvo. Mifananidzo iri pachinhanho zvakare. Pakazere, iyo mavara anowanzoita kunge echokwadi kune echokwadi, asi kushandisa Smart AI kwaizosimudzira iyo mifananidzo, iyo yakabatsira mune akadzika mwenje makesi.
Oppo R17 Pro kamera sampuro neUsiku modhiTTimes India / Sami Khan
Oppo R17 Pro kamera sampuli isina Night modeIBTimes India / Sami Khan
Iyo portrait modhi inouya neakawanda akati wandei mhedzisiro, senge Firimu Chiedza, Mono-Tone, Bi-Ruvara, Canvas uye Shake. Pakati penzira dzese, ini ndawana iyo Chiedza cheFilm uye iyo modhi yekunakisa kuti inakidze pakanyanya. Asi hapana chinokunda mwenje wepanyama, zvirinani kwandiri. Portrait inoshanda pane selfie kamera futi, asi ini ndakawana iyo yekumberi kamera kutadza kana paine kupenya kwechiedza kumashure kwangu. Mushure mezvose, kune chete zvakaringana chete lens inogona kuita. Mumamiriro mazhinji ezvinhu, iwo maSelfie akabuda zvakanaka.
Oppo R17 Pro kamera samplesIBTimes India / Sami Khan
Kana ndichifanirwa kusarudza, iwo maR17 Pro makamera anouya mushure mebhatiri, dhizaini uye kuratidza nenzira imwechete. Iwo makamera haana kusarudzika, asi iwo haasi kuita pasi zvakare. Sechikamu chepakeji yakazara, vanoita zvakanaka. Asi ini ndakanyadziswa zvisingaite nenyaya yekuti foni inongorekodha mu Full HD resolution uye 4K haisi sarudzo.
Ndakaororwa pandanzwa Oppo R17 Pro yakauya ne8GB RAM uye 128GB yekuchengetedza. Kushushikana kwangu kwese nezve multi-tasking kwaive nyore. Asi ini ndaive ndisina chokwadi (uye ndanyadziswa kutaura chokwadi) kuona R17 Pro inoratidza Snapdragon 710 processor. Sezvo iyo R17 Pro yaive yekutanga foni kuuya neQualcomm's nyowani chipset, ini ndaifanirwa kuyiyedza mune chaicho-nyika kesi kuti unzwisise mashandiro.
Zvino, kune wepakati mushandisi, iyo R17 Pro haisi kuzove inoodza moyo zvachose. Muchokwadi, vashandisi vemasimba havazonzwa musiyano mukuru. Asi zvinhu zvidiki senge kuvhurwa kwepurogiramu zvingatomboonekwa kune mumwe munhu ari kusimuka kubva kune Snapdragon 845-inofambiswa smartphone pano.
Ini ndaishandisa iyo R17 Pro kusvika padanho randakashandisa iyo 6T, sekutamba PUBG Nhare, kutenderera mavhidhiyo, kumhanya mabhenji, kuwanda-tasking uye zvimwe. Ndakaona lags muUI, asi inogona kunge iri nekuda kweColorOS ganda pamusoro peiyo Android Oreo OS. Multitasking haina kukonzera chero hukuru hwekukuvara kweapp kana kutamba PUBG Mobile haina kuodza moyo. Paive nemusiyano mumifananidzo pakati peR17 Pro neOnePlus 6T, asi mashandiro mumutambo zvaive zvakafanana. Iyo R17 Pro yaisazondibvumidza kuve nemifananidzo yeHDR muPUBG, asi iyo HD mifananidzo ine yakakwira furemu mitengo, uye anti-aliasing inogoneswa, pakanga pasina chekunyunyuta nezvazvo.
Pakazara, iyo itsva Snapdragon chipset inoshanda nemazvo ne8GB RAM uye inokodzera vazhinji vanorema vashandisi kunze uko. Asi iyo ColourOS, iyo ichiri yechinyakare, haina kuwedzera kune iyo yekutanga ruzivo iyo iyo R17 Pro inofanirwa kupa.
Oppo R17 Pro inomutsidzira kuvapo kwechiratidzo muIndia uye inowedzera huwandu hwayo kubva pakati-renji kusvika kune epamberi-chikamu mafoni.
Oppo R17 Pro ine mapoinzi akanaka ekutengesa, senge dhizaini inobata maziso uye bhatiri rinoshamisa rine SuperVOOC, izvo zvingave zvakakwana kukwezva vatengi. Asi ichakatarisana nemakwikwi akaomarara kubva kuOnePlus 6T kuIndia. Oppo R17 Pro inorongedza masimba akanaka uye makamera, bhatiri rinogara uye kuratidzwa kwakanaka, zvakawanda kuve nechokwadi kuti hazvirasike pakati pemakwikwi.
Chinhu chakanyanya kudzoreredza chandinoona pano ndeyechikuru ColourOS 5.1 yakavakirwa pane Android Oreo, iyo inogona kushandisa kusimudzira kuona iyo R17 Pro haibvi kuF-Series rudzi.
Shota paHuawei P30 Pro: Ongororo
Kudza 8C Kudzokorora: Kutsika mundima ine ngozi
4 zvinhu Oppo zvaita zvakanaka muF11 Pro: Zvokutanga Maonero [Mifananidzo]